Ingqungquthela ye-IGLTA yeHlabathi eza kubanjelwa eMilan nge-26 ka-Okthobha nge-29
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » LGBTQ » Ingqungquthela ye-IGLTA yeHlabathi eza kubanjelwa eMilan nge-26 ka-Okthobha nge-29
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • LGBTQ • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Imitshato yothando • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IsiXeko saseMilano sijonge phambili ekwamkeleni i-IGLTA. Iya kuba lithuba elikhethekileyo lokwamkela uluntu lwe-LGBTQ +, ukuqhuba kunye nefuthe elifanelekileyo kwishishini lokhenketho. IMilano iya kubonisa imeko yayo ebandakanyayo, isebenzisa amandla oluntu lwasekhaya ukwenza wonke umzuzu we-IGLTA ngamava awodwa eMilanese.
I-LGBTQ yamanye amazwe + yoMbutho wokuHamba iya kubuyela eYurophu kunye nomnyhadala wayo wokuqala we-Okthobha 26-29, 2022.
Indibano, inkulumbuso yemfundo kunye nothungelwano lotyelelo lwe-LGBTQ +, iya kuba yindibano yokuqala yombutho waseYurophu ukusukela eMadrid kwi2014.
Umsitho wawusetelwe u-2020 ekuqaleni, kodwa kwafuneka uphinde ucwangciswe ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
Umbutho we-LGBTQ wamazwe aphesheya kwezokuHamba uza kuzisa iNdibano yeHlabathi yama-38 eMilan, ngomhla wama-26 ukuya kowama-29 ku-Okthobha ka-2022. isetelwe u-2014, kodwa kwafuneka iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenzeke,
"Siyavuya ukuba ekugqibeleni sikwazi ukubhiyozela ubudlelwane bethu obude kunye nempumelelo ne-Italiya, kwaye sibonise iMilan, esona sixeko samkelwa li-LGBTQ + kweli lizwe," utshilo. IGLTA UMongameli / i-CEO uJohn Tanzella. “Ngelixa ukuhlehliswa kwakudanisile, inkomfa ezakuqhubeka iya kuba nentsingiselo ngakumbi kwindawo esiya kuyo kunye nobulungu bethu. Le ndibano iza kugxila kwizicwangciso ezibandakanya ushishino kunye namathuba okunxibelelana ukuxhasa impumelelo yecandelo lethu. ”
Izicwangciso ze-IGLTA zase-Itali bezisebenze iminyaka emithathu ngokusebenzisana ne-ENIT (iBhodi yoKhenketho yeSizwe yase-Italiya), i Isixeko saseMilan kunye ne-AITGL (Umbutho wase-Italiya we-LGBTQ + yoKhenketho), kwaye izakubanjwa e-UNAHOTELS Expo Fiera Milano. Ingqungquthela yeHlabathi iya kubandakanya indawo yokuThengisa / yokuThengisa, ngokubambisana neJacobs Media Group yase-UK, ebonisa ukuqeshwa komntu ngamnye, kunye neeseshoni zemfundo kunye neminye imicimbi yothungelwano.
“Asikaze sithandabuze ukuzibophelela kwethu ekuziseni IGLTA eMilan, utshilo uMaria Elena Rossi, uMlawuli weNtengiso kunye noKwazisa, ENIT. “Ngo-2022, abazimeleyo be-IGLTA bazakufumanisa izinto ezintsha kwizinto zethu zokhenketho kunye nokugxininisa ngakumbi kumava asemgangathweni adibanisa iMilan kunye nommandla ojikelezileyo. Ngokusebenzisana nenethiwekhi yabo neengcali kwezokhenketho kunye neenkokheli zokucinga singaqiniseka ngomnyhadala ophumeleleyo. ”
"IsiXeko saseMilano sijonge phambili ekwamkeleni i-IGLTA," utshilo uLuca Martinazzoli, Umphathi Jikelele, iMilano kunye namaQabane. “Iya kuba lithuba elikhethekileyo lokwamkela uluntu lwe-LGBTQ +, ukuqhuba kunye nefuthe elifanelekileyo kwishishini lezokhenketho. IMilano izakubonisa imeko yayo ebandakanyayo, ixhase uluntu lwasekhaya ukwenza umzuzu ngamnye we-IGLTA amava awodwa eMilanese. ”
"Le ndibano e-Itali iya kuba sisitshixo sokuqhubela phambili kwihlabathi elitsha lokuhamba emva kwendyikityha yokufa," utshilo u-Alessio Virgili we-AITGL. "Ukukhuthaza ukuhamba kwe-LGBTQ + nokusingatha lo msitho lishishini elilodwa kunye namathuba emfundo e-Italiya nakwishishini lethu lokuhamba lendawo. Ilizwe lifumana i-2.7 yezigidigidi zeerandi ukusuka kuhambo lwe-LGBTQ +, kwaye siyazingca ngokuba umsitho we-IGLTA uza kunika amashishini ethu izixhobo zokubamkela kakuhle, ukuze siqhubeke nokukhulisa le ntengiso eMilan nase-Italiyane iphela. "
Ukusukela ngo-1983, iNdibano yeHlabathi ye-IGLTA ibikuludwe lokuzimasa ukuya kuluhlu lweempawu zokuhamba ezinomdla kwintengiso ye-LGBTQ +. Umbutho kutshanje ubambe indibano ebiyimpumelelo phakathi kwabantu kunye nokuphuculwa kokhuseleko kunye neenkqubo zempilo okokuqala ukusukela oko kwaqala ubhubhane. Ingqungquthela ye-IGLTA yeHlabathi ibonelela ngokubonakala okubalulekileyo kwesixeko esisingathiweyo ngeengcali ze-LGBTQ + kwezokhenketho ezivela kwihlabathi liphela, kubandakanya abacebisi ngezokuhamba, abaqhubi bezokhenketho, abachaphazeli, kunye nabameli abavela kwiihotele nakwindawo eziya kuzo.